မိဘရဲ့သွန်သင်မှု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မိဘရဲ့သွန်သင်မှု
- ခင် သုတ
Posted by ခင် သုတ on Jan 29, 2015 in Creative Writing | 22 comments
ဆုံးမနည်းမှန်ဖိုတော့လိုပါတယ်တချို့ကသွင်သွန် ရာမှာအရမ်းတော်ကြတယ် ဥပမာ
ကြားသွန်သွင် မှုကြောင့်သူမလည်းလူတော်ြ
About ခင် သုတ
ခင် သုတ has written2post in this Website..
There's enough on the earth for everyone' need but not for everyone' greed.
View all posts by ခင် သုတ →
ခင် သုတ says:
နေရာတကာ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြပြီး ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်မပေးရင်…
ချစ်ရာမကျ … နှစ် ရာပဲ ကျလိမ့်မယ်…
ဆိုတော့… ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ် … ကိုယ်ဖြစ် ကိုယ်ခံ…
ချစ်တာလား နှစ်တာလား ဆိုတာ ခွဲသိဖို့ အရင်လုပ်ပေးရမယ်…..
အချစ်လွန်ပြီး နှစ်သလို ဖြစ်သွားကြတာတွေ များနေလို့
ဟိုမှာဖက်.. ကျောင်းသူားတွေတောင်းဆိုထားတာဖတ်ပြီး.. ၀င်လာသမို့.. အဲဒီဖက်နွှယ်ပြောရရင်….
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာ.. မိဘကအရေးကြီးတယ်ဆိုပေမယ့်..ကလေးနောင်ရေးနဲ့..အသိပညာတိုးတက်လာအောင်… လုပ်ပေးတာမှာ.. ကလေးကျောင်းတွေက..အင်မတန်အဓိကကျနေတာသတိထားမိတယ်..။
ကလေးအတွက်.. အစာအဟာရကအစ… ကျောင်းမှာ… စနစ်တကျ.. တွက်ချက်.ကြွေးတာမို့.. မိဘက..အမဲသားမစားရဆိုပြီး.. ဦးနှောက်မဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ယူလို့မရ…။
ရိုက်နှက်ဆုံးမရင်လည်း.. ကျောင်းကဆရာကတဆင့်..မိဘတွေ… ရဲရောက်.. ရုံးရောက်ဖြစ်…
လိုအပ်တဲ့.. အလေ့အကျင့်.. လူမှုရေး..မလုပ်ပေးရင်လည်း.. ကျောင်းက.. ကလေးသူငယ်သင်ကြားရေးပရို(ပရောဖက်ရှင်နယ်ဆရာ)တွေက.. စနစ်တကျသင်ပေးသမို့.. ကျုပ်တို့လို… အင်မီးဂရန့်မိဘတွေထက်.. ကလေးက..အများကြီးပိုသိသွား..
ပညာရေး.. ပညာရေး.. ရဲ့.. ဘက်ဂျက်… ဘက်ဂျက်… အင်မတန်အရေးကြီးကြောင်း…။
မိဘအခဏ်းကဏ္ဍထက်.. ဆိုင်ရာပရောဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်တဲ့.. လေ့ကျင့်သင့်ကြားထားတဲ့.. ဆရာတွေက.. အဓိကနေရာက.. လုပ်နိုင်မှသာ.. အတိဇာတ ..မိဘဖက်သာလွန်သူတွေဖြစ်လာ..မွေးထုတ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီး.. မိဘဆိုတာ… (အများအားဖြင့်) ကလေးသူငယ်..သားသမီးကို ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်ရတယ်ဆိုတာ.. စေတနာသာရှိ.. လုပ်ရမယ့်နည်းလမ်း.. တကယ်မသိသူများဖြစ်ပါတယ်လို့…။
Totally agreed. ဆရာ ဆရာမ ​တွေဆီက ရယ်​..အ​ပေါင်းအသင်း​တွေဆီက ရယ်​သင်​ယူတာများတယ်​။ ​ကျောင်းခန်းထဲမှာကုန်​တဲ့အချိန်​ကပိုများ​နေတယ်။ သင်​ယူမှုပုံစံ​တွေ​ပြောင်းသင့်​တယ်​လို့​တော့ခံစားရတယ်​။ စာသင်​​ကျောင်း​တွေကစ​ပြောင်းရင်​ ​ရှေးရိုးစွဲမိဘ​တွေကိုပါ သူ့သားသမီး​တွေက​ပြောင်းယူသွားလိမ့်​မယ်​လို့ထင်​ပါတယ်​။
သူကြီး နဲ့ အိုင်းရစ် ကို ကန့်လန့်တိုက် မဟေ့။
ဒီလို ဆရာ တွေ သူငယ်ချင်း တွေ နဲ့ မ တွေ့ ခင် စိတ်ဓာတ် မှာ အနာပေါင်းများစွာ ရနေ တဲ့ ကလေး တွေ အတွက် ဘယ်သူ့ မှာ တာဝန် ရှိမလဲ ဆိုတာလေး။
ယူအက်စ်မှာတော့.. ကလေးမှာစိတ်အနာရှိနေတယ်ဆိုတာ.. သိသွားရင်.. ကျောင်းက..ဆိုရှယ်ဆားဗစ်ကိုတိုင်ပြီး.. ဆိုရှယ်ဆားဗစ်ကမိဘကိုလာဆုံးမသဗျ…။ အိမ်မှာကိုလာထိုင်နေပြီး… ဆုံးမတာ…။
သူတို့ဆုံးမလို့မှမရရင်..ကလေးကိုပါ.. အပြီး… ခေါ်ထုတ်သွားပါလေရော…။
မိဘတွေရဲ့အခဏ်းကဏ္ဍလျှော့ချရမယ်..။ ဘာသာရေးအယူဟောင်းတွေကလေးတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးအောင်လုပ်ထားတာတွေ..ဖျက်သိမ်းဖယ်ပစ်ရမယ်..။
ကျောင်းတွေမှာ.. ပရိုတန်းအဆင့်ဆရာတွေ.. လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးကြရမယ်..။
Elementary, Middle, and High School Principals – Bureau of …
How to Become an Elementary, Middle, or High School Principal. Principals typically needamaster’s degree in education administration or leadership.
.လက်ဦးဆရာ မည်ထိုက်စွာ ပုပ္ဖာစရိယ မိနှင့်ဖ ဆိုသမို့လား…..အရေးကြီးတာပေါ့
သစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းကို ပုံသွင်းမယ်ဆိုရင် နုစဉ်အခါကတည်းက လိုရာပုံသွင်းရတယ်။
ရင့်မှ ပုံသွင်းရင် ပင်ပန်းတဲ့အပြင် သစ်ကိုင်းကျိုးတာပဲ အဖတ်တင်မယ် လို့ ကြားဖူးတယ်။
လူဆိုတာကလည်း ငယ်ငယ်ကတည်းက မိဘ ဆရာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကောင်းနဲ့တွေ့မှ ကောင်းကောင်း သင်ကြားခံခဲ့ရသူဖြစ်မှ လူကောင်းသူကောင်းအဖြစ်နဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ၀င်ဆန့်မယ်။
လက်ဦးဆရာ မိနှင့်ဖ သည်အရေးကြီးသည်ဟူသော အဆိုကို ကန့်ကွက်ရန်မရှိသော်လည်း စဉ်စားမိတာတစ်ခုက မိဘမဲ့ ကြီးပျင်းလာရတဲ့ကလေးတွေအတွက် လက်ဦးဆရာ မိနှင့်ဖ ဆိုသောဆိုးရိုးသည်မှားပါအံ။
နဲနဲ ထပ်ချဲ့ တွေး ရအောင်။ တစ်ခြား ဘက်ကပေါ့။
မှားတဲ့ ဘက်ကလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပါ။
အမေ တစ်ယောက်က သူ့ကလေး ကို ဘာမှ လုပ်မပေးဘဲ ကလေး ကိုချည်း လုပ်ခိုင်းခဲ့ ရင် ကလေး က သူ့ဟာသူ အမှီအခို ကင်းကင်း နဲ့ တော့ လုပ်တတ်သွားပါရဲ့။
ဒါပေမဲ့ အမေ နဲ့ ကလေးကြား ရင်းနှီးမှု၊ ကလေး က အမေ့ ကို အားကိုးချင် မှု နဲ သွားမှာ ရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
ဒီတော့ ကြီးသွားချိန် အဲဒီ အချိန်လေး အတွက် သူ့စိတ်ထဲ မှာ ဘာမှ မကျန် တော့ ဘူး။
အမေ မရှိလဲ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အတွေး နဲ့ စိမ်းသွား နိုင်မလား။
ကလေး ကို သင်ရမှာက တာဝန်ယူတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ် သွင်းပေးဖို့ က အဓိက အရေးကြီးတာပါ။
အဲဒီစိတ်ကလေးကိုသာ ကလေး ဆီမှာ သွင်းပေးနိုင်ရင် အမေ က ဘယ်လောက် လုပ်ပေးပေး သူ့ဟာသူလဲ လုပ်တတ်အောင် သင်ပါတယ်။
တစ်ချို့ ကလေး တွေ ကို အမေ တွေ ပစ်စလက်ခတ် ထားကြတာ မြင်ရတာလဲ ဟန် မကျဘူး။
သူတို့ဟာသူတို့ တော့ ဖြစ်သလို ရပ်နိုင်သွားပါရဲ့။ စိတ်အနာလေးတွေ နဲ့ပေါ့။
ကြီးသွားချိန် ကိုယ့်ဟာကို လုပ်တတ်ရင်တောင် အမေ့ ဆီမှာတော့ ကလေး ဘဲ တစ်ချိန်လုံး ဖြစ်နေချင်ပါတယ်။
ငယ်တုန်းက အမေ နဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ အချိန်လေး တွေ က ပြန်တွေး ရင် အရသာ ရှိတာ။
ပြောတော့ သာ လွယ်တာ ပါ။ လက်တွေ့မှာ လုပ်ဖို့ အတော် ကျင့်ရပေါ့။
ဗုဒ္ဓ ရဲ့ အလယ်အလတ်ကျင့်စဉ် ဆိုတာ တကယ်ဘဲ အကျိုးများ တာ ပိုပိုပြီး သိလာနေတယ်။
မှားရာကနေ..သင်ခန်းစာယူတတ်အောင်…တကြိမ်မှာပြီးသား အမှားမျိုး ထပ်မမှားအောင် ..လမ်းပြပေးနိုင်ရမယ်..
အဲ့လို ဖခင်မျိုး ဖြစ်အောင်…ကြိုးစားကြည့်ဦးမယ်.. ။
သိတတ်တဲ့သားသမီးတွေကတော့အရာရာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်တတ်ကိုင်တတ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်ငါကိုလူတော်ဖြစ်အောင်ပုံသွင်းပုံတာငါ့မိဘ ဘဲလို့တပ်အပ်မြင်ကြမှာပါ။နောက်ဆုံးတော့ မိဘဆီပါဘဲ။ငါ့မိဘ ကြောင့်ငါအခုလိုလူတော်ဖြစ်လာတာ။ဒါကြောင့် အလိုလိုက်ခန်ရတဲ့ သားသမီးတွေ ထက်အများကြီးမိဘအပေါ်သိတတ်ကြပါတယ်။
သိတတ်တဲ့သားသမီးတွေကတော့အရာရာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်တတ်ကိုင်တတ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်ငါကိုလူတော်ြ ဖြစ်အောင်ပုံသွင်းပုံတာငါ့မိဘ ဘဲလို့တပ်အပ်မြင်ကြမှာပါ။နောက်ဆုံးတော့ မိဘဆီပါဘဲ။ငါ့မိဘ ကြောင့်ငါအခုလိုလူတော်ဖြစ်လာတာ။ဒါကြောင့် အလိုလိုက်ခန်ရတဲ့ သားသမီးတွေ ထက်အများကြီးမိဘအပေါ်သိတတ်ကြပါတယ်။
ဆိုရှယ်ဆားဗစ် များ ရဲ့ မြောက်များစွာသော စေတနာမဲ့ တာဝန်မဲ့ မှု တွေ ကြားမှာ ရေတိမ်နစ် ခဲ့ရတဲ့ ကလေး တွေ ရေတွက်လို့ မရတော့တာ လဲ သိတယ်ဟုတ်။
မူးယစ်ဆေး စွဲ လိုက်တယ် ဆိုတာ တစ်ခါမှား တာနဲ့ တစ်ဘဝ သွားရော ဆိုတာ လဲ သိတယ်ဟုတ်။
ကလေး ကောင်းတိုင်း မိဘ ကောင်း တာ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ်။
ကောင်းတဲ့ မိဘတိုင်း ဟာ ကောင်းတဲ့ သားသမီး တွေ ကို လက်ဆင့်ကမ်း နိုင်တယ်။
ကလေးမလေး မသုတ ရေ့
ဒီရွာထဲ ဘယ်သူ တွေ အငြင်းထူ တယ် ဆိုတာ ရိပ်မိရောပေါ့။ lol:-)))
အတွေးပွါးစရာ လေး အတွက် ကျေးဇူးနော်။ :))
.အငြင်း ဘယ်သူသန်သလဲတော့ မသိ။ အရမ်းချောင်တဲ့တိုင်းပြည်မှာ နေတာတောင် သားသမီးတစ်ယောက်တည်းယူထားတဲ့လူ အညံ့ဆုံး။ ခလေးတစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ တွက်ရေးမကိုက်ဘူးပေါ့နော်။
ဟ ဟာ့ ဟာ ဟား
ကျုပ်ညီမ အုပ် ပဟေ့။
ဒီမယ် ညီမတော် ရဲ့။
အိမ်ထောင်ပြုတာရော၊ ကလေးယူဖို့ပါ ပလန် ထဲ ထည့်ဆွဲ မထားခဲ့တဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက် ဆီက ကလေး တစ်ယောက် ထွက်လာတာကိုဘဲ ကမ္ဘာမြေကြီး က ကောင်းချီး ပေးသင့်ပြီ။
မိဘ စောင်းးးစောင်းး လက်ကနေ ဆရာစောင်းစောင်းးး လက်ရောက်သွားးးရင်ရော
.ပုံသွင်းတဲ့ကိစ္စကို ပြောတာလား ငါ့ညီမ။ အဲလို ပုံသွင်းတာကို ဘရိန်းဝပ်တယ်လို့ ခေါ်တာပေါ့ကွယ်။ ပုံသွင်းခံရတာ မှားတယ်လို့ ကမ္ဘာကြီးက ယူဆကြတယ်။ ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင် ဘာသာရေးကိုတောင် လက်ဆင့်မကမ်းတော့တာ။ ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်ကို fresh ထားကြရတယ်။ အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေနဲ့ မသွတ်သွင်းရဘူးတဲ့။ ဂျာမနီက ပါမောက္ခ ပြောတာပါ ညီမရေ။ ငါ့ညီမ ခင်သုတ ပြောတာက အယူအဆတွေနဲ့ ပုံသွင်းတာ မဟုတ်ဘဲ နိုင်သလောက် တာဝန်အသီးသီးကို ထမ်းဆောင်စေတာဆိုရင်တော့ ထောက်ခံပါတယ်။ ခလေးက ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး တတ်သွားတာပေါ့။ မိဘတွေရဲ့ ရှေးရိုးစွဲ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့တော့ ခလေးခေါင်းထဲ မသွင်းစေလိုပါ။ ခက်တာပဲ။ မြန်မာမှာကလည်း အနန္တောအနန္တ ငါးပါး ကျေးဇူးဆိုတာ သိပ်ပြီး ဦးထိပ်တင်တာ။ ဟို တိုက်ပွဲတွေဖြစ်၊ ကချင်လိုပေါ့လေ၊ ပြေးကြလွှားကြ၊ ဘ၀ပျက်ကြတော့ အဲဒီ အနန္တော အနန္တငါးပါး ကျေးဇူး ဘယ်ရောက်သွားတုန်း။